Voampanga ho ‘niketrika ditra’, navotsotra ilay mpanao gazety Luis Carlos Diaz ao Venezoela · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 15 Marsa 2019 5:14 GMT
Vakio amin'ny teny Ελληνικά, Español, Français, English, македонски, Nederlands, Português, Italiano, Deutsch, русский, Aymara, bahasa Indonesia, Shqip, srpski, English
Voampanga ho “nikonokonona ditra” (instigación a delinquir) izy ary navotsotra narahana fepetra fa hitatitra any amin'ny manampahefanan'ny fitsikilovana (SEBIN) isaky ny valo andro, ary hijanona ao amin'ny faritany Venezoelana. Voaràra tsy hiresaka momba ny zava-niainany tamin'ny fitazonana azy ihany koa izy.
Tsy hita ity mpanao gazety 34 taona ity ny harivan'ny 11 Martsa. Ny 12 Martsa tamin'ny 2:30 maraina, nitondra azy tany amin'ny efitranony miaraka amin'ny tanana mifatotra ireo mpitandro filaminana. Niditra tao amin'ny tranon'izy sy ny vadiny izy ireo, naka ireo fitaovana elektronika maromaro, ary avy eo niala ny efitra sy nitondra an'i Diaz niaraka tamin'izy ireo
Nanomboka ny maraimben'ny 12 Martsa, nahita fanohanana marobe avy amin'ny tambajotran'ireo fahalalahan'ny fampitam-baovao sy ny zon'olombelona manerantany mitaky ny famotsorana azy ny aterineto. Nanome lalana ny #LiberenaLuisCarlos (Avotsory i Luis Carlos) ny tenirohy #DondeEstaLuisCarlos (Aiza i Luis Carlos), izay nanjary lohahevitra voalohany malaza indrindra teo amin'ny tontolon'ny twitter Venezoeliana sy anisan'ireo sioka nahatratra ny tampony manerantany.
Mpikambana ato amin'ny fiarahamonina Global Voices efa ela i Luis Carlos. Niasa ho fiarovana ny fahalalaham-pitenenana sy ny fampiasana tambajotra nomerika nandritra ny folo taona mahery izy mba hitazonana ny fidiran'ny daholobe amin'ny fampahalalam-baovao eo anivon'ny krizy misy any Venezoela. Nampiantrano fandaharana lahatsary malaza be (taloha tao amin'ny YouTube, ankehitriny ao Patreon) izy sy i Soto izay anoloran'izy ireo vazivazy sy fanehoan-kevitra ara-politika.